Ra’isul wasaare Kheyre oo gaaray Khartoum | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Ra’isul wasaare Kheyre oo gaaray Khartoum
Ra’isul wasaare Kheyre oo gaaray Khartoum
Muqdisho (SNTV)-Ra’iisulwasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xassan Cali Khayre iyo wefti uu hoggaaminayo ayaa gaaray Khartoum si ay uga qeyb galaan shirka IGAD oo heshiis rasmi ah ay ku kala saxeexanayaan dhinacyada isku haya Koonfurta Sudan.
Dalalka gobalka ayaa dadaal xoogan ugu jiray sidii ay u soo afjari lahaayeen colaadda siyaasadeed ee ka dhex jirta Koonfurta Suudaan.
Horey ayay Madaxda ku bahoobay Ururu gobalaadka IGAD ay ku kulmeen Addisabab oo xarun u ah Ethiopia, waxaana madaxda Ururka ay horay iskula soo qaadan xal u helista xaaladda murugsan ee Koonfurta Suudaan ka jirto.
Kulan la isugu keenayo dhinacyada isku hayo ayaa la filayaa in la qabto isagoo gogol xaar u noqon doono dadaallada nabadeeda ee loogu jirto Suudaanta Koonfureed, waxaana Soomaaliya uga qeyb galaya Ra’isul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Previous articleCiidanka Amniga oo toogasho ku dilay kooxo Baabuurta dadka ka dhex disha
Next articleJarmalka oo furay xarumo lagu karantiilayo muhaajiriinta inta ay ka helayaan aqoonsiyada magangelyo doonka ah ‘Sawirro’